ikhaya elitsha kwaye lipholile - I-Airbnb
ikhaya elitsha kwaye lipholile
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguKerstin
Ikhaya, indlwana entsha kufutshane ne-Isaberg Mountain Resort. I-cottage ilala ubuninzi babantu abayi-6 kumagumbi ama-3, apho i-2 ineebhedi ze-bunk. Isicwangciso somgangatho ovulekileyo kunye negumbi lokuhlala / ikhitshi. 2 izitovu zobusuku obuhle obupholileyo. I-TV eneminikelo yeCanal Digital kunye netshaneli zaseJamani kunye neDanish kunye namajelo e-movie e-4. Ishawa / WC, umatshini wokuhlamba.
Terrace macala onke ngefanitshala yangaphandle ngamaxesha amnandi elangeni. Ukuhamba umgama wokuqubha ngeejethi.
Wamkelekile kwindlu yam epholileyo ebekwe ngaphandle kwelali i-Öreryd, malunga ne-7 km kumantla e-Isaberg. Ujikelezwe liqela elincinci lamakhaya eeholide kwaye kungenjalo ihlathi, uya kufumana uxolo, uxolo kunye nokuzola apha. I-cottage yi-75 m2, ihlukaniswe ngamagumbi okulala amathathu. Enye encinci enkulu enebhedi ezimbini, ezimbini ezincinci ezinebhedi enye.
Isicwangciso somgangatho ovulekileyo wegumbi lokuhlala / ikhitshi. Ikhitshi libandakanya isiqithi sasekhitshini, isitovu, umatshini wokuhlamba izitya, i-microwave, ifriji / ifriji, umatshini wekofu, iketile, i-waffle iron, itoaster njl. Igumbi lokuhlala kunye neTV, iindawo zomlilo ezi-2 / iinkuni ezibandakanyiweyo / iqela le-sofa, itafile yokutyela enezihlalo zeendwendwe ezi-6, ikona yokufunda. Igumbi lokuhlambela elitsha elitsha / iWC / ishawari / enobushushu obuphantsi. kaloliwe eshushu itawuli kunye nomatshini wokuhlamba. Idekhi yomthi ejikeleze yonke i-cottage / phantse /, ifenitshala yegadi, i-barbecue. Umgama wokuhamba ukuya echibini lokuqubha kunye neejethi (900 m). E-Isaberg ungaqesha iphenyane kwakunye nebhayisekile.
Ilinen yebhedi inokuqeshwa nge-SEK 100 / umntu.
Kwaye eyona nto ingcono kakhulu - ukucocwa kokugqibela akunakuthengwa - KUBANDAKANYELWE KWIXABISO!